How To Upgrade Windows7- Zomi Computer and Internet Association
Home / Windows / How To Upgrade Windows 7
Taang Sianpu May 06, 2012 Windows
ပြောင်းလို့ရပါတယ်. ဘာတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းရသလဲ ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံး ပြောင်းလို့ရတာတွေကို ပြောပြပါ့မယ်. အဲ့ဒါကို ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်ဟာကို ပြောင်းသင့်သလဲ စဉ်းစားပါ. version အနိမ့်ကနေ version အမြင့်ကို Upgrade လုပ်လို့ရပါတယ်. သူ့ version အလိုက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်. အရင်ဆုံး ဘာလို့ ပြောင်းချင်တာလဲဆိုရင် အခုလက်ရှိ window အမျိုးအစားကို မကြိုက်ဘူး ဒီ့ထက်မြင့်တာကို upgrade လုပ်ချင်တာမျိုးလဲ ရှိသလို . Window တော့ တင်ချင်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် driver တွေ software တွေနဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ပြန်တင်နေရမှာက အလုပ် တစ်ခုလို ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလဲ ရှိမှာပါ. အခုလို window upgrade လုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် မိမိရဲ့ ယခင် တင်ထားတဲ့ driver တွေနဲ့ install လုပ်ထားတဲ့ software တွေကို ဘာတစ်ခုမှ ထိခိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.
Windows7Starter ကနေ ဆိုရင် Home premium, Professional,Ultimate သုံးမျိုးမှာ ကိုကြိုက်တဲ့ version ကို upgrade လုပ်လို့ ရပါတယ်.
Windows7Home premium ကနေဆိုရင်တော့ Professional နှင့် Ultimate နှစ်မျိုးမှာ ကိုကြိုက်တဲ့ version ကို upgrade လုပ်လို့ ရပါတယ်.
Windows7Professional ကနေဆိုရင်တော့ Ultimate တစ်မျိုးကိုပဲ upgrade လုပ်လို့ရမှာပါ.
အဲ့တော့ upgrade လုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်.
Start ရဲ့အပေါ်မှာ Search Programs and Files ဆိုတဲ့ Search box လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်. အဲ့ဒီ့အကွက်ထဲမှာ ပုံထဲကအတိုင်းAnytime Upgradeလို့ပဲ ရိုက်ရိုက် Windows Anytime Upgrade လို့ရိုက်ရိုက် ကြိုက်သလို ရိုက်ရှာလိုက်ပါ အပေါ်က result မှာ windows anytime upgrade ဆိုပြီးတော့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တွေ့တဲ့ Windows Anytime Upgrade ဆိုတဲ့ icon လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. အောက်ကပုံအတိုင်း Windows Anytime Upgrade လုပ်ဖို့အတွက် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
အဲ့ထဲမှာမှ Enter an upgrade key ဆိုတဲ့အကွက်ကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်. နှိပ်လိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း Enter an upgrade key ဆိုတဲ့ xxxxx.xxxxx.xxxxx.xxxxx.xxxxx ဆိုတဲ့အကွက်မှာ အောက်က ပေးထားတဲ့ ကီးကို ထည့်လိုက်ပါ. ကိုပြောင်းချင်တဲ့ version ရဲ့ key ကို ရိုက်ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
(မိမိကြိုက်တဲ့ တစ်ကြောင်းကိုသာ ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်)
ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
ကဲ ရိုက်ထည့်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း မိမိထည့်ထားတဲ့ key ကို verifying လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.
verify လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. I accept ဆိုတာကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း ထပ်ပေါ်လာရင်တော့Upgrade ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.
အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ upgrading window ဆိုပြီးတော့ upgrading လုပ်နေပါလိမ့်မယ်. အနည်းဆုံး 10 လို့ပြောထားပေမယ့် connection ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်. အင်တာနက် speed မြန်ရင် မြန်သလိုမျိုး တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ တူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး. နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ သူအဖို့ကတော့ 10 မိနစ်လောက် ကြာပါမယ်. အားလုံးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ You have successfully upgraded your Windows7Starter edition. ဆိုပြီးတော့ ပေါ်လာမှာပါ.
အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. အဆင်မပြေတာလေးများရှိရင် အောက်လင့်မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်